Izindlu e- Barkly
Ararat, Victoria, i-Australia
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Alli
Uhambo olufushane oluya kuzo zonke izindawo zokudlela, izindawo ezikhangayo nezinkonzo. Indlu endala, ethuthukisiwe, ngakho-ke hhayi ukunethezeka, kodwa ukuhlanzeka nokunethezeka kuzokwenza uzizwe usekhaya. Ilungele ukuhamba ngempelasonto, ukuvakasha kwewayini, imicimbi yomndeni noma iholide eliphumulele eduze nama-Grampians. Ama-tv angu-2, i-dvd + cd player, i-split system air cond, ikhishi eligcwele eline-gas cooker ne-microwave, itiye nekhofi, enikeziwe. Ukulala okungu-7, okuhlanganisa nombhede owodwa we-trundle, kukwenza ukonga.
Indawo emaphakathi ekahle ngempela yenza le ndlu yesitayela sekotishi ilungele abahambi (uhambo olufushane kakhulu ukusuka esiteshini samabhasi nesitimela) nalabo abajabulela ukuwina kanye nokudla, nazo zonke izindawo zokudlela ezinkulu ezitholakala kalula.
4.68(140 okushiwo abanye)
4.68 · 140 okushiwo abanye
I-Ararat iyindawo ekahle yokuphumula nokuphumula. Kuphephe kakhulu futhi kunobungane, ungathola ama-goosebumps wenza uhambo lwethu oludumile lwezipoki, noma uchithe impelasonto epholile uvakashela izivini eziningi. Noma uma ungafuni ukuzulazula kude kakhulu nasekhaya, vele ulandele indlela yamagugu ezungeze inhliziyo yedolobha, uphuze ikhofi ngokunethezeka ezingadini ezinhle zase-Alexandra Park, noma uzitike ngokudla okumnandi ku-Barkly Street.
Sihlinzeke ngebhokisi lokukhiya kuvulandi ongaphambili njengoba singeke sibe khona esizeni ukuhlangana nezivakashi. Ikhodi ithi 1955. Nokho sihlala imizuzu embalwa kuphela uma ushayela futhi singatholakala kalula ngocingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Ararat namaphethelo